စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် တရုတ် Wifi Smart Wall Socket ထုတ်လုပ်သူများ - Zhechi Electric
China Discount Wifi Smart Wall Socket အခမဲ့နမူနာ ပေးပါသည်။
Smart Wifi Wall Switch Socket အတွက် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်-
Wifi Smart Wall Socket အတွက် အဓိကအင်္ဂါရပ်-
1.Hands-Free Voice Control: လွယ်ကူသော အသံဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်စေရန် Amazon Alexa နှင့် Google Home တို့နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
2. နေရာတိုင်းမှထိန်းချုပ်ပါ- Wifi Smart Wall Socket အတွက် အခမဲ့မိုဘိုင်း "SMART LIFE" ဖုန်းအက်ပ် (Android & iOS နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်) ဖြင့် သင့်အိမ်ရှိစက်ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ပါ
3. Timer လုပ်ဆောင်ချက်- သင့်အိမ်နှင့် ရုံးမီးများကို အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်ပါ။ အက်ပ်၏ အချိန်တိုင်းကိရိယာ လုပ်ဆောင်ချက်သည် သင့်အား မီးဖွင့်ရန်/ပန်ကာ အလိုအလျောက် ပိတ်ရန် အချိန်အတိအကျကို စီစဉ်နိုင်စေမည့်7ရက် အစီအစဉ်အချိန်ဇယားများကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ အလိုအလျောက် အဖွင့်/အပိတ် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် သင့်ရွေးချယ်မှုအား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ 1min/5min/30min/1hour စသည်တို့ကို နှစ်သစ်အတွက် ရွေးချယ်စရာများ။
4.Share Device.Moes စမတ် wall socket တွင် မတူညီသော မိသားစုဝင်များမှ မျှဝေထားသော ထိန်းချုပ်ဆိုဒ်များစွာ ရှိနိုင်ပါသည်။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်ခုသည် socket များစွာကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ Wifi Smart Wall Socket
5. IFTTT ဖြင့် နောက်ထပ် အင်္ဂါရပ်များကို ပေါင်းထည့်ပါ- 'ဒါဆိုပါက၊ ၎င်း' သည် အခမဲ့ ဝဘ်အခြေခံ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်မီးခလုတ်၊ မီးချောင်းလှည့်ခြင်း၊ ပန်ကာများ သို့မဟုတ် သင်ထွက်ခွာသည့်အခါ အိမ်မပြန်မီ သို့မဟုတ် အခြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို သင့်အိမ်သို့ မပိတ်မီတွင် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ပါးလွှာစေနိုင်သည်။ IFTTT နှင့်၊
6. မှတ်ချက်- ကြားနေဝါယာကြိုး လိုအပ်သည်၊ 2.4GHz Wi-Fi ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်သည်။
hot Tags:: Wifi Smart Wall Socket၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းနေ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်
Eu Outlet လျှပ်စစ် Wall Smart Socket
Tuya Smart Universal Plug Wifi Socket
Wifi Smart Power Strip Socket Plug
Smart Wifi Wall Switch Socket